N'ihe gbasara ụgbọ elu na mgbasa ozi na saịtị nbudata
Edozi N'ihe gbasara ụgbọ elu na mgbasa ozi na saịtị nbudata
1 afọ 3 izu gara aga #830 by ọ bụ
Ọ ga-amasị m na mgbe ị na-ekpughe foto nke ụgbọ elu na-ebudata, a na-egosi ihe osise n'ime ime. Liveries dị mma ma na-adọrọ mmasị, mana "ọnụgụ" ndị ahụ dị mma dị ka mpụga.
1 afọ 3 izu gara aga #831 by rikoooo
Daalụ maka ịkekọrịta echiche gị, M kwenyere na gị na n'ọdịnihu ga-etinye ọtụtụ panel na VC screenshots
Enwere m ike ịnụ ihe ọ bụla ọzọ.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: ọ bụ
1 afọ 3 izu gara aga #832 by ọ bụ
Tanx. Ugbu a, n'abalị Friday na Norway. Maka oge m na-agbagharị n'elu ugwu 6000 n'ugwu North West District na Norway.
1 afọ 2 izu gara aga #847 by groba
Ndewo m, abum ohuru ebe a, m gbaliri igbunye B727 maka P3D v4, ma installer anaghị arụ ọrụ.
Achọrọ m onye ntinye pụrụ iche maka Win10?
1 afọ 1 izu gara aga #848 by N00b
Hi Groba, ma eleghị anya, gbalịa ịgba ọsọ na ọnọdụ ncheta. Ọtụtụ FSX, FSX-SE, na P3D na-arụ ọrụ na-akwado 10.
10 ọnwa 2 ụbọchị ago #936 by DRCW
Buru n'uche na P3D V4 ibu ya tinye-ons site na nchekwa na gị akwụkwọ nchekwa. Lockheed mere nke a ma ọ bụrụ na ị ghaghị iweghachi usoro ihe omume ahụ, ị ​​gaghị ahapụ faịlụ ndị tinyekwuru gị ma malite ịmalite. Mgbe ụfọdụ, installer nwere ike ghara rụọ ọrụ nbudata gị. Gaa na akwụkwọ gị ma chọta faịlụ nke a (Gosi na 3D v4 Add-ons "ma mepee ya.) I kwesịrị ịnwe igbe nchekwa ụgbọelu ahụ. Detuo ya ma kpo ya na folda ụgbọelu gị dị na ihe nkedo. ụgbọelu n'ime usoro ihe omume
Oge ike page: 0.967 sekọnd